Pr Vololontiana Hanta "Manahirana anay mpitsabo ny Covid 19..."
Tsisy tranga vaovao tao anatin'ny 24 ora farany ka nijanonana ho 128 ny voa nanomboka 19 martsa hatramin’ny omaly 28 aprily. Nisy sitrana 7 ka niakatra 82 izany hatramin’izao.
Miisa 46 ireo mbola manaraka fitsaboana. Tsy misy marary mafy, ary tsy misy maty. Nisy olona tonga avy tany ivelany, efa natao fitiliana tsy nisy covid-19. Avy eo natao fitiliana fanindroany dia io fa “positif”, izay azo heverina ny hisian’ny tahaka izany. Zavatra tena mitombina ny tahaka izany, ary tena mbola manahirana ny mpitsabo azy io tsimokaretina na ny “SARS-COV-2” io, ary manahirana ny “communauté scientifique mondiale”, hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle. Tena mora mifindra izy ny tsimokaretina. Ny fotoana idirany mandra-pahatonga ny fotoana hisehoan'ny soritraretina na « incubation » dia efa mamindra ilay olona. 3 hatramin’ny 5 andro, ary mety misy miitatra herinandro na 2 herinandro. Izay ny anton'ilay fanibohana 14 andro. Misy olona natao fitikiana iray tsy misy, avy eo natao fitiliana fanindroany lasa misy. Mila mitandrina sy manaraka ireo fepetra. Tsy fantatra tsinona hoe ahoana marina ny hery fiarovan'ny tsirairay. Mila manao arotava, tsy mifandray tanana, manasa tanana am savony matetika satria maro no alehan'ny tanana. 3065 fitiliana no vita hatreto. Mampiavaka antsika ny hoe amin'ny tena ilaina azy no hanaovana ny fitiliana, karohana ireo olona ahiahiana. Efa ho antsasaky ny sitrana ireo marary, tsy misy maty. Zava-dehibe izany ary noho ny ezaka nataontsika rehetra miaraka, hoy ity mpitsabo ity. Mila tohizana ny ezaka. Mbola misy valin-teny mitombo hoe maharitra firy andro na firy volana ilay hery fiarovana rehefa avy voa ka sitrana. Raha miverina mifanena amina olona efa voa, dia lojika ho lasa “cas contact” indray izay.